Mere Ị Chọrọ A abụọ wheel Self adịzi Electric skuuta - Jomo Technology Co., Ltd
E nwere ụfọdụ ejiji na nwere nsogbu batrị usoro na n'ime osisi na-chụọ n'ọrụ. The osisi a na-haziri maka na anabata nje sensọ na-eso gị n'ebe ọ bụla ị na-ịgbanwee gị ibu na. Mgbe abanye a Swagtron, 1st nzọụkwụ ụkwụ na a oge si n'azụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ịdabere azụ, ị kwụpụ azụ. Ezie na ọtụtụ onwe adịzi scooters ga idi oké gbapụrụ ọsọ, na mberede akwụsị na overcharging, ha nwere ọchịchọ bụghị idi arọ arọ maka ogologo durations nke oge. Ọ pụrụ ime ka gị touring otutu mfe. The Roto-gbalaga (ma ọ bụ Koowheel ika ) osisi nwere ike ịbụ nnọọ mfe njem na -adị nnọọ nchebe tụnyere ndị ọzọ, tumadi n'ihi na osooso bụ nnọọ mfe, n'ihi ya, ọ na-adịghị eche n'ezie dị ka ọ chọrọ ka koro gị n'elu. The ika ọhụrụ imewe nke Koowheel osisi dị mkpa iji na-aga site a dịgasị iche iche nke-achọpụtazi na-Mankeumman 2272 akwụkwọ.
Mgbe oge ruru ka i wee pụọ ma na-ihe rụrụ, na mkpa ka ị na-egosi isi ebe ị na-eme ya, na-Koowheel One patent pụrụ n'ụzọ 8.5inch nnukwu wiil abụọ wheel hoverboard K7 ga-eme ndị ọrụ gị. Swagway bụ ọlaedo na-eto eto nke hoverboard ahia na ikpe nke mgbasa ozi. The ụwa n'ụzọ dị ukwuu kpebiri aha ya a hoverboard. Mara banyere atụmatụ, imewe mkpebi, ụdịdị, mmezi nhọrọ nke niile na-ekwu banyere hoverboards otu otu na-enwe ihe echiche na nke hoverboard bụ ezigbo dị ka gị mkpa na-aba n'akpa uwe. N'ihi na ihe niile na-teren njem, ị ga-achọ a hoverboard na ibu wiil. N'ime a di na nwunye nke nkeji nke na-edebe ihe, ị ga na-eche dị ka a pro na meela Scootin 'ruo ọtụtụ afọ. Koowheel Board touts onwe ya dị ka a hoverboard, ma ọ n'ezie na-egosi dị ka ihe dị ka a skateboard. Ọ bụghị a fancy ụgbọala, ọ bụ dị ka a skateboard na skuuta ngwakọ na ike napụta ọṅụ na onye ọ bụla-agba ịnyịnya ya. Mgbe na-agụ anyị Self adịzi skuuta 2 wheel hoverboard Easy eburu 6.5 inch Rubber Solid taya Ikanam ọkụ K8, ị na enwetatụbeghị nhọrọ ka a nhọrọ. Anyị na-atụ na anyị nwete na-bara uru ka ị na-iji mee ka ihe ọmụma zụọ.
Na ike na-adị mfe aga si n'ime ka si na Anglịkan, ha zuru okè na-eji na ngalaba campuses, na egwú-eme ememme, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ekele, na ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile, onwe-guzozie skuuta ahịa na ahịa nwere na ihe ọ bụla oge hụrụ na ha ihe na-agaghị na-eweta nsogbu ndị mmadụ na-eme ka ojiji nke. Mgbe na-ekpe ikpe ahụ postcho ọnọdụ na a wuru na-nkenke mụ gyroscope, na ụgbọala digital ụbụrụ na-arụ ọrụ si ziri ezi ntụziaka site na a mgbagwoju anya na oké-ijeụkwụ Central microprocessor, batrị mere na moto na steadiness ụgbọ ala. Ọzọkwa, padded ikpere mmanya e mere na-ebuli ụzọ nke ị management ụzọ nke na ngwaọrụ nwere ike gbanwere ọnọdụ, si otú na-eme ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na ị na ekele na nkenke nke n'iru. Ya Ọzọkwa atụmatụ elu àgwà aluminum ehiwe wiil na roba na taya maka mfe agafe.
Post oge: Mar-21-2018